On the isixazululo ukuze sheathe kuvulandi ngaphakathi abantu beze ngezindlela ezahlukene. Othile usanda ufuna ukuxoxa egumbini eseduze Lodge, futhi umuntu ofuna ukwenza kwayo ikamelo itiye ethokomele noma ehhovisi. Lapha, kuye ngokuthi indlela wena ofuna ukubona kuleli gumbi, futhi udinga ukuba asondele umbuzo kanjani kangcono sheathe kuvulandi ngaphakathi.
Masizeni nempikiswano ngokulandelana. Ake uqale nge ukufudumala emphemeni kokubili yezimbangela ezivame kakhulu zesikhumba sakhe kanye elicwebezelayo. Yiqiniso, indlela onokwethenjelwa kunayo yonke ukwahlukanisa isikhumba yangaphandle. Kodwa endabeni nge kuvulandi kumane nje alisasebenzi, futhi kuvulandi ukuze vimbela ngaphandle enzima kakhulu futhi kuyabiza.
Into yokuqala okudingeka glaze emphemeni, kungenjalo yonke imizamo ukwahlukanisa zimane lutho. Futhi yimuphi umhlobiso izindonga nakanjani uhlushwa imvula, iqhwa kanye lokushisa iconsi. Ukukhethwa kuyinto isitini futhi Tile, kodwa asihlobene umbuzo lokho kungenziwa abagqoke emphemeni ngaphakathi njengoba sekugcineni uyoba ugange ngaphandle. Kodwa ngemuva kokuthi efakwe elicwebezelayo kuvulandi, ungakwazi uqhubekele ilungiselelo ingaphakathi.
Ukuze uqale, yebo, kudingeka phansi. Uma ufuna kuvulandi wayenothando ngempela, kufanele beka izingodo, futhi phezu kwabo, lapho ingacamelisa flooring lokhuni. Ibhodi ke ungakwazi noma ukupenda, noma walala phezu linoleum, kodwa ungakwazi abeke Tile.
Kwimakethe ungathola omningi impahla, kanye nezisebenzi kuphela zihlale zifudumele (base ngaphezu kwalokho camera nge ngombala zokuhlobisa), kanye yokuthi yokuqedela ezengeziwe ayidingeki.
Cabanga ethandwa kakhulu ekuvikeleni izinto kufakwe isigaba "sheathe emphemeni kuka ngaphakathi" :
Foam. Kuyinto impahla edume kakhulu futhi ethandwa for ukwahlukanisa. amaphesenti ayisishiyagalombili lokho sheathe emphemeni ngaphakathi Foam. Ukusebenza naye Kulula kakhulu futhi evumelana. Bayidayise ngendlela amapuleti unxande. Ingaphezulu odongeni ngaphambi kokufakwa akudingi nokuqondanisa kanye ngemva kokumiswa master kancane kuphela ukuvala ezinkulu ngesikhathi amalunga omzimba. Futhi kungase kwenzeke ukuthi akudingeki ukuba ngivale.
polyethylene Foamed. Yenziwe polyethylene abavamile sekudlule ukucutshungulwa ekhethekile. Ngaphansi ngomfutho ophakeme ukuze a imvuthuluka osuke usushisa kakade plastic ukhonza umphenyi okhethekile ukukhulula-carbon dioxide. Ngenxa yalokho, i-extruder ukhiqiza Indwangu okuyinto bushelelezi ngaphandle nangaphakathi ukungena nakwamanye amazwe. Lezi Bubbles yangaphakathi futhi andise izindawo nangokuvikela material. Nasezinsikeni izindonga nophahla ke usebenzisa glues ekhethekile noma ngezinye iziqobosho. Slots kungcono kwalungisa amagwebu.
Manje asikhulume ngalokho sheathe emphemeni ngaphakathi uma ukwahlukanisa ayidingekile (isibonelo, ezindaweni eningizimu), noma uma ufuna ukuhlobisa ukwahlukanisa izinto.
Ngomqondo onabile, manje ukuncintisana namanye kuphela izinkuni ngamunye kanye plastic. Penda izindonga ophahleni emphemeni upende ubhekwa hhayi kuphela imfashini, kodwa futhi uneconomical. Izinkuni ukunika induduzo noma iliphi igumbi, futhi emphemeni alikho Kulokhu okuhlukile. Kodwa panel plastic noma zamapulangwe ushibhile kakhulu futhi ngcono ngokuya ukunakekelwa.
Usafuna ukubalula bamboo njengendlela material ongena uhlu lokho sheathe kuvulandi ngaphakathi. Kuyinto enhle ngokwako, akudingi cishe akukho ukwelashwa eyengeziwe (ukuvulwa ukuvenisha, wokucwebezelisa, njll), isikhathi eside futhi ukumelana lokushisa ukweqisa. Ngakho, ngisho noma ungenawo vimbela kuvulandi ngokucophelela, ungakwazi uxhumano nomsebenzisi ngokuphepha yayo bamboo asezindongeni.
Indlela ukukhetha sealant amawindi: Izici kanye nokubuyekeza